नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रमा कार्यरत एकजना प्राविधिकको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । विराटनगर– ३ घर भएका ५७ वर्षिय पुरुषलाई सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनलाई सोमबार कोशी अस्पतालमा ल्याइएको थियो । कोशीबाट धरान पठाउने तयारी भएपनि धरानले बेड नभएको बताएपछि काेभिड १९ उपचार केन्द्र विराटनगरमा भर्ना गर्न गरिएकाे थियाे । कोभिड १९ उपचार केन्द्र विराटनगर प्रमुख डाक्टर दीपक सिग्देलले उपचारका क्रममा बुधबार दिउँसो ४… पुरा पढौ
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ मा बुधबार बिहान ५४ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । उनी एउटा फर्निचरमा काम गर्ने मजदुर रहेको पोखरा १६ का वडाध्यक्ष जीवन आचार्यले जानकारी दिए । ती संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुको खोजपड्ताल भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए । ती संक्रमितलाई आइसोलेसनमा लगिसकिएको छ । पुरा पढौ
जनकपुरका पूर्वमेयर कृष्ण गिरीको कोराना संक्रमणले मृत्यु भएको छ । ७३ वर्षीय गिरीको मंगलबार राति काठमाडौंमा मृत्यु भएको हो । १५ दिनअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि थप उपचारका लागि उनलाई काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । गिरी ०४४–०४५ सालमा जनकपुर नगरपालिकाको मेयर भएका थिए । नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य गिरीका दुई छोरा र श्रीमती छन् । पुरा पढौ
नेपाली पहिचान, नेपाली स्वाभिमान ः समग्र विकासमा हाम्रो अभियान भन्ने मूल नारासहित स्थापित जागरण अभियान नेपालले भर्चुअल विचार गोष्ठी गरेको छ। कोरोना कहर र अबको अर्थतन्त्र बिषयक विचार गोष्ठीमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभासद माननीय हरिशरण आचार्यले अब सबै दलले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । पोखरा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले ब्यवसायीहरु यो महामारीबाट मर्माहत बनेकाले राज्यले ब्यबसायीका पुनरुत्थानमा जोड दिए । प्रा।डा यादवराज गौडेलले कारोना… पुरा पढौ
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ र १६ मा कोभिड १९ संक्रमित फेला परेका छन् । पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा गरिएको परीक्षणमा पोखरा ६ का २३ वर्षीय पुरुष र पोखरा १६ का ५४ वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । दुवै संक्रमितलाई आईसोलेसन कक्षमा राखिसकिएको गण्डकीका स्वास्थ्य निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए । बुधबार बिहान अध्यावधिक विवरण अनुसार गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ६ सय ५० पुगेको… पुरा पढौ
केही दिनअघि संक्रमण पुष्टि भएका पोखरा ३ नदिपुरको प्रहरी बिटमा कार्यरत प्रहरीको सम्पर्कका आएका ६ जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । उनीहरु सबै एकै परिवारका हुन् । वडामा संक्रमितको संख्या ९ पुगेको छ । संक्रमितहरुलाई आइसोलेसनमा लैजान बाँकी रहेको जानकारी दिँदै पोखरा ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले बुधबार बैठक बसी अन्य निर्णय हुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘अवस्था गम्भीर भयो । सबै संक्रमित अहिलेसम्म घरमै छन् । भोलि बैठक… पुरा पढौ
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १९ मा फेरि ४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । मंगलबार साँझ कोरोना पुष्टि भएका यी ४ जना नै महिला हुन् । उनीहरुलाई आइसोलेसनमा लैजाने तयारी भएको पोखरा १९ का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले जानकारी दिए । यसअघि संक्रमण देखिएका ६ जनाको सम्पर्कमा आएका ४ जनामा कोरोना देखिएको उनले बताए । यसअघि पोखरा १९ मा एक जनाको कोरोनाबाट ज्यान गइसकेको छ । पोखरा १९ ले साँझ अपिल… पुरा पढौ
नेपालमा आज थप ६३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार योसँगै कोरोना संक्रमितकाे कुल संख्या २३ हजार ९ सय ४८ जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १० हजार ५ सय ६२ जनाको परीक्षण गर्दा ६३८ जना संक्रमित भेटिएका हुन्। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यसअघि सोमबारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या १६ हजार ४९३ थियो ।… पुरा पढौ